Abụ Ọma 66 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ Ọma 66:1-20
Ntụziaka e nyere onye nduzi. Abụ, abụ olu ụtọ. 66 Tikuonụ Chineke mkpu mmeri, unu niile ndị bi n’ụwa.+ 2 Bụọnụ abụ olu ụtọ iji too aha ya.+ Nyenụ ya otuto dị ebube.+ 3 Sịnụ Chineke: “Lee ka ọrụ gị niile si dị egwu!+ Ndị iro gị ga-eji egwu bịakwute gị n’ihi ịdị ukwuu nke ike gị.+ 4 Ndị niile bi n’ụwa ga-akpọrọ gị isiala,+ Ha ga-abụkukwa gị abụ olu ụtọ, ha ga-abụku aha gị abụ olu ụtọ.”+ Sila. 5 Bịanụ hụrụ ọrụ dị iche iche nke Chineke.+ Otú o si emeso ụmụ mmadụ dị egwu.+ 6 O mere ka oké osimiri ghọọ ala akọrọ;+ Ha wee jiri ụkwụ si n’etiti osimiri gafere.+ Anyị malitere ịṅụrị ọṅụ n’ime ya n’ebe ahụ.+ 7 O ji ike ya na-achị achị ruo mgbe ebighị ebi.+ Anya ya dị n’ebe mba niile nọ.+ Ka ndị isi ike ghara ibuli onwe ha elu.+ Sila. 8 Gọzienụ Chineke anyị, unu ndị dị iche iche,+ Meekwanụ ka a nụ olu otuto a na-enye ya.+ 9 Ọ na-edebe mkpụrụ obi anyị n’etiti ndị dị ndụ,+ O kweghịkwa ka ụkwụ anyị maa jijiji.+ 10 N’ihi na i nyochawo anyị, Chineke;+ Ị nụchawo anyị dị ka e si anụcha ọlaọcha.+ 11 I mewo ka anyị banye n’ụgbụ e ji achụ nta;+ I mewo ka nsogbu na-anyịji anyị úkwù. 12 I mewo ka ịnyịnya mmadụ efu wụfee anyị n’isi;+ Anyị agabigawo ọkụ na mmiri,+ I wee kpọpụta anyị mee ka anyị nwere onwe anyị.+ 13 M ga-eji àjà a na-esurecha n’ọkụ bata n’ime ụlọ gị;+ M ga-emezu nkwa m kwere gị,+ 14 Nke m meghere egbugbere ọnụ m kwupụta,+ Nke ọnụ m kwupụtara mgbe m nọ n’oké ihe isi ike.+ 15 M ga-eji anụ mara abụba chụọrọ gị àjà a na-esurecha n’ọkụ,+ Jirikwa ebule chụọrọ gị àjà. M ga-achụ oké ehi na mkpi n’àjà.+ Sila. 16 Bịanụ gee ntị, unu niile ndị na-atụ egwu Chineke, m ga-akọ+ Ihe o mewooro mkpụrụ obi m.+ 17 M ji ọnụ m kpọkuo ya,+ M jikwa ire m too ya.+ 18 Ọ bụrụ na m na-eche ihe ọjọọ n’obi m, Jehova agaghị anụ olu m.+ 19 N’ezie, Chineke anụwo;+ Ọ ṅawokwa ntị n’ekpere m.+ 20 Ka Chineke bụrụ onye a gọziri agọzi, bụ́ onye na-elegharaghị ekpere m anya, O wepụghịkwa obiọma* ya n’ebe m nọ.+
Abụ Ọma 66